Kitapom-batsy any an-tsekoly
Kitapo Sling / Kitapo mpitondra hafatra
Ny majika amin'ny lamba biodegradable
Ny lamba biodegradable dia manondro ireo lamba izay simba mora sy voajanahary amin'ny fampiasana zavamiaina bitika. Ny biodegradability ny lamba dia voafaritra indrindra amin'ny habetsaky ny akora simika ampiasaina amin'ny tsingerin'ny fiainana lamba. Arakaraka ny ampiasana simika azy, vao mainka maharitra ny biodegrade ...
Ny Fair Canton faha-129 dia hatao an-tserasera eo anelanelan'ny 15 ka hatramin'ny 24 aprily
Ny foibe faha-Canton faha-129 dia hatao an-tserasera eo anelanelan'ny 15 ka hatramin'ny 24 aprily. Ny faha-129 sy ny fampiroboroboana China dia hatao an-tserasera eo anelanelan'ny 15 sy 24 aprily. -19 ny valanaretina, ary koa ny ...
Kitapo izay manalavitra ny mikraoba
Amin'ny ezaka ataontsika hanampiana ny krizy Corona-Virus 19, dia miara-miasa amin'ny Sanitiz® izay 80 taona hamoronana vahaolana antimicrobial tsirairay izahay. Inona ny lamba antimicrobial? Ny teknolojia miady amin'ny bakteria dia azo faritana ho toy ny entona miasa manimba ...
Miverina amin'ny famokarana
Hatramin'ny niverenany tamin'ny asa sy ny famokarana tamin'ny 10 febroary, ny orinasanay dia nahatratra fanombohana tsara tamin'ny volana voalohany niverenany hiasa amin'ny alàlan'ny fifantohana amin'ny fisorohana ny valanaretina sy ny fifehezana ary ny famokarana famokarana, miaraka amina fivezivezan'ny mpanjifa hatrany. Ao anatin'ny atrikasa famokarana, ny seho dia afaka ...
Kitapo vita amin'ny tavoahangy plastika
Inona no lamba voaverina? Ny lamba vita amin'ny kofehy voajanahary na sentetika dia tsy ampiasaina amin'ny fitafiana fotsiny fa ampiasaina koa any an-trano, hopitaly, toeram-piasana, fiara, amin'ny endrika fitaovana fanadiovana, ho toy ny fitaovana fialamboly, na fitafiana miaro sns. Raha nalamina ireto lamba ireto dia namboarina ary ampiasaina indray amin'ny ...